Dastabej » प्रधानन्यायाधीश जबराको चर्चित फैसलाः म्यारीज जुवा होईन, जन्म कैद घटाएर साढे ८ वर्ष
प्रधानन्यायाधीश जबराको चर्चित फैसलाः म्यारीज जुवा होईन, जन्म कैद घटाएर साढे ८ वर्ष – Dastabej
प्रधानन्यायाधीश जबराको चर्चित फैसलाः म्यारीज जुवा होईन, जन्म कैद घटाएर साढे ८ वर्ष
नेपालगन्ज । गैर सांसद आफ्ना जेठानलाई आफ्नो कोटाबाट उद्योग मन्त्री बनाएर चर्चामा रहेका सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेरवि जवरा विवादित बन्दै गएका छन् । उनको आलोचना दैनिकरुपमा ठूला सन्चार माध्यमबाट हुन थालेको छ । त्यसो त सर्बोच्च अदालतका न्यायाधी नभएका बेला पनि उनले गरेका फैसलाहरुले निकै चर्चा पाएका थिए । स्वतन्त्र बिश्व कोषका अनुसार प्रधान न्यायाधीश जवराका चर्चित र विवादित फैसलाहरु मध्ये एक हो तासको खेल ।
१) जबराले झन्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा एउटा मुद्दामा तासको खेल म्यारिज जुवा नभएको फैसला गरेका थिए। उनको उक्त फैसला पनि निकै चर्चित भएको थियो।
२) पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जिल्ला र पुनराबेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेकोमा त्यसलाई उल्ट्याई आठ वर्ष ६ महिना सजाय कायम गरेका थिए । कोइरालालाई आफ्नै श्रीमतिको हत्या मुद्दा लागेको थियो । डिआईजी कोइरालाले श्रीमतिको हत्या गरी शव जलाएका थिए । उक्त मुद्दा १५ महिनादेखि सुनुवाई भएको छैन ।
३) तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।
४) कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्धको अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला चोलेन्द्रले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेत रहेको इजलास २०७४ फागुन २८ मा बहिष्कार गरेका थिए । पराजुलीको योग्यता सार्वजनिक रुपमै विवादित भएको र योग्यता पुग्ने आवश्यक सक्कल प्रमाण देखाउन नसकेको उनको दावी थियो । त्यही घटनापछि पराजुली अदालतमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका थिए र त्यस मुद्दामा थप सुनुवाइ पनि अघि बढाउन सकेनन् । राणाको दावीलाई समर्थन पुग्ने गरी तत्कालीन न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले २०७४ चैत ३० मा पत्र पठाएपछि पराजुली पदमुक्त भएका थिए ।
ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्। उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।
उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी ट्रेनिङसमेत लिएका छन् । चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।
७ कार्तिक २०७८, आईतवार १३:१८ प्रकाशित
नरैनापुरमा छात्राहरुलाइ निःशुल्क साइकल वितरण
Freya Allen poses for photographers
‘विशाल संघर्ष’का लागि तयार हुने उत्तर कोरियाको घोषणा
पर्यटकीयस्थलमा धमाधम पूर्वाधार निर्माण
१.	नेपालगन्ज एयरपोर्टः बिमान स्थल कि बन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र ? दुई महिनामा तीन पल्ट जहाजमा बन्यजन्तु ठोक्किए
२.	कता हराए प्रहरीले पक्राउ गरेको २ ट्रक गोरु ?